Njirimara na nhazi nke ahihia / ịchapu diski, oke nke ojiji ọnwụ: Na ndụ kwa ụbọchị, ọ bụrụ na anyị attentionaa ntị na ya, a na-enwekarị usoro ịkpụ na ịchọ mma ụlọ. Ọ na-egbutu ala, ọla, osisi, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na agụụ ...
Electric hama bit bụ ụdị electric rotary hama akuakuzinwo na nchekwa ipigide mmasị na pneumatic hammering usoro. Ọ nwere ike mepee oghere 6-100 mm na ihe ndị siri ike dịka ihe, brik, nkume, wdg, na arụmọrụ dị elu. ...
Oghere oghere, nke a makwaara dị ka nkwọ oghere ma ọ bụ oghere oghere, na-ezo aka na okirikiri okirikiri pụrụ iche maka ịkpụzi oghere okirikiri na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ injinia. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, dị mfe iji buru, nchekwa na ọtụtụ ebe. Ọ ...